Torohevitra momba ny fisafidianana fizarana GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Torohevitra momba ny fisafidianana fizarana GNU / Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fitsinjarana, soso-kevitra
Rehefa misy mpampiasa vaovao manatona ny tontolon'ny GNU / LinuxMatetika ianao no tototry ny isan'ny safidy tokony hofidinao. Izany no mahatonga ny fisafotofotoana matetika noforonina, koa ao <° Linux, hanome torohevitra vitsivitsy hotadidinao izahay rehefa misafidy.
Betsaka ny tranokala miresaka momba izany, na ny sasany toa ny Zegenie Studios aza, manampy anao hisafidy fizarana iza GNU / Linux ianao dia tokony (na afaka mampiasa) mampiasa, amin'ny alàlan'ny fitsapana somary tsotra. Manoro hevitra manokana azy ireo aho. Saingy raha ny tena izy dia tsy maintsy mazava tsara amintsika ny momba ny lafin-javatra sasany tokony horesahina rehefa hisafidy iray isika fizarana, ary heveriko fa ny voalohany dia ny filàna anananay.
Soa ihany miaraka GNU / LinuxTsy mainty na fotsy ny zava-drehetra, ary misy zavatra ho an'ny rehetra, amin'ny loko rehetra ary amin'ny tsiro maro. Andao jerena ny torohevitra vitsivitsy izay mety hahasoa antsika.
1 Manitatra ny fahalalanao.
3 Misy rindrambaiko.
5 Tontolo iainana Desktop.
6 Ilay distro iray ihany, saingy misy tsiro hafa.
7 Fiaraha-monina sy fanampiana.
Manitatra ny fahalalanao.
Antony iray lehibe. Tokony hazava tsara ny habetsaky ny lohahevi-dehibe hofidintsika rehefa misafidy fizarana ary izany no antony, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manao antontan-taratasy ampy momba ny toetran'ny sasany GNU / Linux, indrindra ny fomba fiasan'ny rafitra fisie sy ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fizarazaran'ireo kapila.
Mba hisorohana ny zavatra tsy ampoizina hitranga amintsika dia tsara kokoa ny manandrana mampihatra ny fahalalana azontsika, amin'ny Masinina Virtoaly. Ao anatiny no ahafahantsika mametraka, manasaraka, manandrana ary manapaka na inona na inona, tsy misy atahorana ho very data.
Amin'ny ankapobeny, raha vao manomboka isika, ary ankoatr'izay dia avy amin'ny hafa isika Rafitra miasa como el Windows o Mac, lojika raha te hanana zavatra mora, intuitive ary miasa isika amin'ny voalohany. Raha raisina ny karazana mpampiasa dia hotolorana ihany koa fa ho tsotra araka izay azo atao ny fametrahana azy.
Ny fizarana toy ny LinuxMint, Ubuntu, openSuse o Mandriva, manome antsika installer tsotra ihany izy ireo, ahafahantsika mametraka ny rafitray amin'ny dingana vitsivitsy monja.
Saika azo atao foana ny mahita rindrambaiko mitovy amin'ny fizarana rehetra, fa ny sasany amin'izy ireo dia manana katalaogy malalaka kokoa hisafidianana, imbetsaka, noho ny fiaraha-monina na ho an'ny antoko fahatelo.
Tokony hotadidintsika ihany koa fa noho ny olana ara-dalàna dia maro ny distros no tsy mampiditra rindrambaiko izay tsy 100% maimaimpoana ho an'ny faritra sasany eto an-tany, ary mety ho voafetra isika amin'izany.
Ubuntu sy ny derivatives, ohatra, dia manana ny repository lehibe indrindra sy feno indrindra misy, nefa koa manana ny malaza PPA (tahiry manokana), izay manitatra bebe kokoa ny katalaoginao.
Iray amin'ireo antony maro, nahoana GNU / Linux Ampiasaina izy io, satria mamela ny famerenana fitaovana sasany izay toa efa lany andro ankehitriny. Isaky ny famoahana ny Rafitra miasa como el Windows o Mac, endri-javatra bebe kokoa no ilaina mba hiasa tsara ireo ary indrisy, tsy isika rehetra no afaka manavao ny solosainantsika isaky ny mandeha Microsoft o Apple ianao maniry.
Misy ny fizarana miompana amin'ilay solo-sainanao taloha izay ilainao an-jorony. Ho fanampin'izay, afaka manome azy fampiasana hafa isika, ary miaraka amin'ny fahalalana kely dia afaka manana mozika an-trano, data na mpizara tranonkala antsika manokana isika.
PuppyLinux, Crunchbang dia safidy hafa tokony hananantsika amin'ny solosaina manana RAM latsaky ny 128 Mb.
Tontolo iainana Desktop.
En Windows manana mpitovo foana izahay Tontolo iainana Desktop. Azo ovaina ny endriny, fa amin'ny farany dia tsy afaka misafidy hafa isika. Ny iray amin'ireo olana tsy fantatry ny mpampiasa vaovao dia ny amin'ny GNU / Linux, afaka misafidy mihoatra ny iray isika Tontolo iainana Desktop, ary hametaka maromaro amin'izy ireo aza.
Ny fizarana tsirairay dia misy a Tontolo iainana Desktop toerana misy anao.
Ary toy izany koa amin'ny rehetra. Saingy tsy midika izany fa azontsika esorina ilay tonga amin'ny toerana misy anao ary mampiasa hafa.
Raha mila birao feno sy matanjaka sy tsara tarehy isika dia tsy maintsy mijery ny Gnome, KDE ary Xfce. Raha zavatra maivana LXDE na E17 no tadiavintsika. Raha mila zavatra minimalista isika dia afaka misafidy Fluxbox, Openbox, IceWM ary mpitantana varavarankely hafa.
Ilay distro iray ihany, saingy misy tsiro hafa.
Raha efa fantatsika izany Tontolo iainana Desktop tadiavinay ary azonay ampiasaina araka ny fahombiazan'ny PC, tsy mila mifidy izay tsiro hanandrana fotsiny isika.
Misy ny fizarana izay manome vokatra azo avy amin'ny derivative, izay misy fonosana sy fanovana sasany, ampiasan'ny Designer, Musicians, Artists, Educators, Writers, Gammers ary koa namboarina tamin'ny fitaovana hafa ankoatry ny PC.
Ubuntu, Fedora Anisan'ny sasany, manana safidy mifanaraka amin'ny toetra sasany izy ireo, mahafeno ny fepetra takiana arakaraka ny zavatra tianao hatao.
Fiaraha-monina sy fanampiana.
Ny teboka iray izay tsy tokony tsy raharahaintsika dia ny fihetsiky ny fiarahamonina manodidina ny fizarana izay ho safidintsika. Arakaraka ny isan'ny mpampiasa no mampitombo ny haavon'ny tatitry ny bibikely sy ny vahaolana mety aminy.
Debian, Ubuntu, LinuxMint, Fedora, ary openSUSE ankoatry ny sasany dia manana vondrom-piarahamonina marobe miaraka amin'ny tranonkala fanampiana, forum, ary fantsom-pifandraisana amin'ny fiteny maro samihafa.
Lazaiko foana ny olona manontany ahy ny sasany fizaranaNy fomba tokana hahafantarana raha tena handeha aminao io dia amin'ny fanandramana azy. Ataovy ao an-tsaina fa izay mety miasa amiko, fa tsy ho an'ny mpampiasa hafa, satria mety tsy manana fitaovana na fahalalana mitovy isika.
Tokony hitandrina tsara isika amin'ny fametrahana a fizarana hizaha toetra azy ary mamaky zavatra amin'ny rafitra efa napetraka na mamafa data sasany. Manoro hevitra anao ny hampiasa LiveCD afaka mihazakazaka amin'ny fahatsiarovana tselatra na Masinina virtoaly mba tsy hitrangan'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Torohevitra momba ny fisafidianana fizarana GNU / Linux
Nanandrana maromaro aho, nahasarika an'i Ubuntu aho noho ny fanamorana ny fametrahana sy ny fampiasana azy, saingy efa ela aho no nampiasa an'i Debian. Tena tsara izy io, saingy manantena aho fa ny kinova 7 dia hanamora ny fametrahana sy ny fanahafana an'ireo vao manomboka, mety ho fomba tsara hanitarana ny fampiasana azy io.
Luis Hernando Sanchez dia hoy izy:
Mageia 2 no ampiasaiko amin'ny PC desktop sy Ubunto 12.04 amin'ny solosaina finday. Faly aho miaraka amin'ny Mageia miaraka amin'ny birao KDE sy Ubuntu miaraka amin'i Gnome. Tsy nanana olana tamin'izy roa ireo aho, manoro hevitra azy ireo aho mba hanome fahafaham-po.
Meh hadinoko kely ny momba ny Win 7.
Valiny tamin'i Luis Hernando Sanchez
Salama daholo 🙂 Lahatsoratra tena tsara! Nanaitra ahy io. Mampiasa Win 7 aho (satria Gammer aho), ary indraindray Ubuntu rehefa manodina ny PC aho ary tsy natao hilalaovana lalao izany. xD
Te hanandrana an'i Debian aho fa miandry ny andiany 7.
Fa eto ny tetikasa iray izay manampy anao hisafidy mifototra amin'ny fanontaniana vitsivitsy
Heveriko fa manampy be sy mora be izany
fistri dia hoy izy:
Fanandramana tamin'ny volana:
Acer Aspire One Netbook miaraka amin'ny Windows XP hatramin'ny 2009. Avelany amiko izany ary lazain'izy ireo amiko fa tsy mbola afaka nifandray tamin'ny Wi-Fi izy ireo, ary izao dia amin'ny Internet ihany no tadiavin'izy ireo, andao hojerentsika raha afaka manao zavatra aho.
Miady tontolo andro amin'ny iray ratsy aho: mpamily wifi, fanavaozana BIOS, firewall ... tsy misy, olana WPA2 io, izay tsy tiany, tsy misy teny miafina raha mampifandray izy ... Mety hitranga:
1) Mametaka Windows XP Professional fa tsy ny Home entiny, mazava ho azy piraty. Ity dia nanolotra soso-kevitra tamin'ny tranonkala tamina forum maro samihafa (toa ny trano wifi sy xp dia lohahevitra miverimberina ao amin'ny Aspire One izay ..)
2) Mametraha linux maivana ao.
Safidy mazava ho azy 2. misafidy SolydX aho. 20 minitra taty aoriana, miasa ny wifi ary mandeha ny zava-drehetra (codecs, youtube, mp3, horonan-tsary…) tsy handrehitra ny console mandritra ny fotoana fohy.
Rafitra miasa maimaim-poana, tsy misy fanapahana hack mihitsy, madio, nohavaozina (ary ny fampanantenan'ny fanavaozana mitohy, satria mihodina izy io) ... Ary hey, tena faly amin'izany, azonao atao ny mitondra azy any amin'ny tranomboky ary manamarina amin'ny internet izay manome anao handresy azy io.
Tranga mivadika. Ny mpikambana iray ao amin'ny fianakaviana dia mividy solosaina finday vaovao, mazava ho azy ny Windows 8 .. Nanandrana nametraka photoshop piraty nandritra ny 5 volana izy, tsy te handre momba an'i Gimp. Tsy fantany ny fandehan'ny rafitra, niantso ahy izy tamin'ny andro voalohany nilaza fa tsy hitany izay misy ny programa, na aiza ny bara, na patatin ...
Mazava ho azy fa efa nolazaiko azy fa tsy afaka manampy azy aho, fa tsy mahatakatra windows intsony, ary latsaky ny 8. Tamin'ny voalohany, nanolo-kevitra ny hametraka linux amin'ny partition hafa aho, hoy izy tsia. Manozona foana izy ary apetraka sy tsy ampiasaina intsony ny solosaina findainy.
Moraly: fahalalahana ho ela velona. Fahalalahana hampiasa izay tianao…. fa koa fahalalahana hanolotra fanampiana ho an'ireo izay mendrika izany. Lasa ny taona nanohanan'ny Microsoft ny namana sy ny ankohonana, ny patch, ny hacks ... tsy eo intsony.
Mamaly an'i fistri
Heber dia hoy izy:
Hahaha, namana maneho hevitra tena tsara. Nanao toy izany koa aho nandritra ny roa taona. Windows 7? Tsy azoko, tsy azoko… (Koreana mpivarotra lehibe izany). Fa tsara kokoa ny mametraka Linux, izay tena tsara lavitra ary maimaimpoana ary maimaim-poana.
Valiny tamin'i Heber
namana mpandray anjara tena tsara, tiako ity tontolo ity GNU / LINUX
ferna dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, aseptika ary maro ny atiny araka ny nikasan'Andriamanitra azy. Ho ahy, mpampiasa Ubuntu fa tia ny GNU / Linux amin'ny ankapobeny, dia ankasitrahana ny fanajana sy ny fahabetsahana rehefa miresaka momba ny distros sy manome tolo-kevitra. ny fananana etika tsy fitongilanana sy fizahan-tavan'olona, ​​dia fahamendrehana sy fanatanjahantena izay tsy ampiasaina amin'ny bilaogy Linuxeros rehetra.
Mamaly an'i ferna
LEGOLAS dia hoy izy:
Fa maninona ny distro vaovao fantatra amin'ny anarana hoe Elementary OS tsy tafiditra ho ohatra, izay notanisan'ny maro ho GNU / Linux tsara tarehy indrindra teo amin'ny tantara ???
Valiny amin'i LEGOLAS
Python na aiza na aiza, na amin'ny iPhone & iPad aza !!!